Ny raharaha momba ny zom-pirenena Saint Lucia | Ny zom-pirenen'i Saint Lucia
Betsaka ny zavatra tokony hodinihina rehefa mifidy firenena ho an'ny zompirenena amin'ny fampiasam-bola. Namorona programa zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola izahay mba hifanaraka amin'ny finiavan'ireo mpilatsaka hofidina rehetra. Avy amin'ireo sehatra efatra fampiasa amin'ny fampiasam-bola tsy manam-paharoa anananay, hatramin'ny volavolan'ny mpamatsy vola isan-taona, amin'ny fironana ara-kolontsaina mahafinaritra, manasa anao izahay hanana fiainana sy firoboroboana miaraka aminay.
Ny vidin'ny fampiasam-bola any Saint Lucia ho an'ny tanjon'ny fahazoana ny zom-pirenena dia napetraka ho toy ny programa mitovy. Ny mpampiasa dia manana safidy efatra izay mitentina 100,000 $ ka hatramin'ny 3,500,000 XNUMX XNUMX dolara amerikana ho an'ny mpangataka tokana. Antsoina ihany koa ny mpangataka handoa ny vidin'ny fanodinana sy ny fitantanana mifandray amin'ny fangatahana azy ireo.